Sawir madow oo madow ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Sawirada madaw ee madow ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay - New York Times
Sawir madow oo madow ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay - New York Times
Astronomers ayaa ku dhawaaqday Arbacadii in ay ugu dambeyntii arkeen aan la arki karin: dalool madow, oo ah duufaan dabiici ah oo aad u qoto dheer oo aad u cufsan oo xitaa iftiin aan ka baxsan karin.
"Waxaan bandhigi qayb ka mid ah our caalamka, waxaan" Shep Doeleman, astronomer Xarunta Harvard-Smithsonian ee jaamacadaha UCLA iyo agaasimaha ka ah dadaal image qabashada, inta lagu guda jiro shir jaraa'id Arbacadii in Washington, DC
image ee ah giraanta iftiin qaloocan ku wareegsan goobada mugdiga qalbiga Galaxy ee loo yaqaan murugsan 87, qaar ka mid ah masaafo 55 million sano oo iftiin ah halkan ka, sida Eye of Sauron , mar kale dib u soo celinta awoodda iyo falalka xunxun. Waa giraanta qiiqa kaas oo xareeya bogga hal dhinac ah ee daa'in.
Si loo qabsado sawirka, xiddigayaashu waxay ku safrayeen meelo kala duwan oo u dhaxeeya galbeedka giriigga ah ee Virgo, oo loo yaqaan Messier 87. Billions of times ka weyn yahay qorraxda sii daayo xoog leh 5 000 xoog leh-tamarta ku tuurin meel bannaan.
[ Diiwaangeli si aad u hesho xasuusinta booska iyo munaasabadaha astronomy .]
Sawirku wuxuu soo jeediyay inuu si cad u qeexo fikrad sidaas darteed xitaa in Einstein, oo godadkoodu madow muuqday, ay diiddanayd in ay aqbalaan. Haddii alaab aad u badan oo meel la iskaga dhajiyo, xooga is biirsaday ee culeysku wuxuu noqdaa mid adag oo meelkuna wuxuu noqonayaa dabin daa'im ah, godka madow. Sida laga soo xigtay aragtida Einstein, arrin, boos iyo waqti dhammaad ah oo ay u egtahay riyo
Subaxnimadii Arbacada, aragti mugdiga ahi wuxuu noqdey xaqiiqo muuqda. Markii sawirka la soo dhajiyay shaashadda Washington, heeso iyo qaylo ayaa ku xigay sacab tumaya.
Sawirka wuxuu ka yimaadaa laba sano oo falanqayn kombuyuutar ah oo ka soo baxa shabakadda raadiyaha antennas oo lagu magacaabo Horizon telescope ee dhacdada. Guud ahaan siddeed raadiye oo raadiye ku yaal lix buurood iyo afar qaaradood caleemaha loo yaqaan 'Sagittarius and Virgo' intii lagu jiray maalmo 10 bishii April 2017.
Shabakadda waxaa loo magacaabaa ka dib markii ay godad madow ah, barta aan la soo celin; Marka laga soo tago horizon munaasabadda, xitaa iftiinu kama baxsan karo jiidashada mugdiga ee godka madow.
Wixii dhowr sano, suugaanta ee sayniska, warbaahinta iyo filimada sida "interstellar" iyo movie "Life Sare" ee dhawaan la daabacay ayaa lagu la yaabka lahaa wakiil] tacliinta thay computer casri ah oo godad madow. Laakiin arinta dhabta ah way ka duwanayd. First, movies godad madow waxaa sida caadiga ah oo colal ku socdeen warar ah disk accretion kulul iyo cambaareeyay wax, sida ay yihiin godadka madow ee Virgo iyo Sagittarius.
Waxaa laga yaabaa inay ka sii muhiimsan yihiin, sawiradu waxay bixiyaan astaamaha cilmi-baarayaasha marka ugu horeysa ee la eego soo gaabinta godka madow. Waxaa la rumeysan yahay in tamarta uu ka kooban yahay awood ku filan si quasars xoog iyo ifafaale kale oo rabshado ka nuclei galactic, oo ay ku jiraan Diyaaradaha in qubmaysa shucaac aad u daran of sano iftiin 5 000 ka Galaxy ee M87.
Inkasta oo cufan, gaaskulaha kulaylku ku wareegsan yahay hareeraha madow, sida biyaha lagu wareejiyo daadin, cadaadiska xoogga leh iyo meelaha macdanta ayaa sababi kara dheellitirka tamarta labada dhinacba. Muuqaal ahaan, godadka madaw ee madaw, oo lagu qarsoomo bartamaha galaxies, waxay noqon kartaa walxaha ugu caansan caalamka.
Wuxuu horey u soo bandhigay dad badan oo ka tirsan Washington Press Club Nambarada goobaha kale ee adduunka ku yaala waxay ku dheceen qiyaastii qarnigii koobaad kadib sawiradii xiddigaha samadu way qallalan yihiin yeellay iyada caan ah oo xaqiijiyey aragtida Einstein ee relativity guud sida sharciga reer Cosmos ee. Aragtida sidaan ah sifooyinkii lahayo ku cuf of space iyo markii ay arrinta iyo tamarta, sida haddii uu furaash hoos qarsoodiga ah sagged, iyo oggol yahay waxa ku jira caalamka oo dhan, oo ay ku jiraan rays light in la raaco trajectories qalooca.
relativity General keentay in fikrad cusub oo ka mid ah Cosmos, taas oo ka-time meel gariiraan laga yaabaa, gacnta, jeex, weyn, waramayaa sida a mix-sayidkiinna iyo xataa weligood baaba'aan in wajiga of god madow.
Si Einstein la yaabay, isbarbardhigyada ayaa tilmaamaya in marka arrin aad u farabadan ama tamar badani ay hal meel ku urursan yihiin, wakhtigu wuxuu noqon karaa burbur, xoqin karaa arrin iyo iftiin joogta ah.
Einstein ma jeclaan fikraddan, laakiin aragtida maanta waa in dunidu ay ku dhacdo godadka madow ee sugaya. si ay wax u dhacaan.
Waxaa jira xayawaanno badan oo jilicsan oo ah xiddigihii gubay shidaalkooda oo burburay. Laakiin qaar kale, oo ku yaala bartamaha ku dhawaad ​​dhammaan galaxies, waa malaayiin, xitaa balaayado jeer oo ka weyn qorraxda.
Qofna ma garanayo sida ay wax u dhejin waayeen. Laalaabka cufan ee tamarta caadiga ah ee Baaskiilka Big?
Cilmi-baadhayaashu sidoo kale ma ogaanayaan waxa dhacaya waxa ku dhacaya godka madow, ama kuwa xoogga leh ee ku jira xarunta, halka, sida ku cad xisaabinta, hadda waxaan ognahay in cufnaanta ay tahay mid aan qarsoodi ahayn iyo in Qiiqa ayaa ka baxa kombuyuutarka Ilaah.
Xaqiiqda joogtada ah ee dhabta ah ee godadka madow ayaa la waayay saddex sano ka hor markii laser-ga indho-indheynaha ama LIGO lagu ogaaday isku dhaca labada qof. oo ah meelo madow oo madow, oo soo diray farxad iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka waqtiga-waqtiga.
Tan iyo markaas, shilalka kale ayaa la duubay, godadka madowna waxay noqdeen kuwo aad u sareeya oo ah inaysan astronomers aanay ku dhibin inay soo diraan ogeysiisyo ku saabsan. .
Laakiin xaqiiqadu waxay leedahay wajiga.
Caddaynta in shayadani yihiin goobo madow oo runtii ah in la ogaado in mugdiga Virgo ee wadnaha uu ka yar yahay saadaalinta xisaabinta godka madow. Hase yeeshee, astronomers-ka ayaa hoos u dhigi kara, inay sii badanayaan inay shaqeeyaan
Meelaha isgaadhsiinta waxaa ka buuxsamaya qaybo culus oo ay ka mid yihiin electron and protons; Kuwani waxay kala firdhiyeen mowjadaha raadiyaha ee godka madow ee ku dhuftey murugo fiiqan faahfaahinta ilaha. "Waxay u egtahay muraayad barafaysan," ayuu yiri Dr. Doeleman, oo ah agaasimaha Horizon Event Telescope.
Si aad u gashato qiiqa oo u eegto qoto dheer ee hooska Wilaayada, astronomers waa inay awoodaan in ay u diyaargaraan teleefishinada gaaban ee gaaban. Oo waxay u baahnaayeen taleefishin weyn. Qodobka ugu weyn ee anteenaha, xajmiga sare ama sii weynaanta ayaa noqon kara.
Gali taleefanka gacanta ee Horizon ee dhacdooyinka, oo lagu magacaabo barta aan dib u soo celinin godka madow; wax kasta oo ka gudubta qaabka dhacdooyinka dhacdooyinka waxay ku dhacaan mugdiga weligiis. Telescope wuxuu ahaa Doeleman riyadiisa riyadiisa, kaas oo lagu dhiirigeliyay daraasaddaha madadaalada madow isagoo baaraya hawlaha qarsoodiga ah ee xarumaha raadiyaha raadadka rabshadaha sida M87.
Isku-dubaridka xogta laga soo diro raadiyaha raadiyaha sida ugu fog sida Koonfurta. Faransiiska, Chile iyo Hawaii, iyadoo la adeegsanayo farsamo la yiraahdo "Long Term Baseline Interferometry", Doeleman iyo asxaabtiisu waxay abuurtay telescope sida weyn ee adduunka, iyada oo awoodda lagu xallinayo faahfaahinta sida yar oo liishada dulsaar ah.  Shabakadu waxay ku korartay antennas iyo xasaasiyad tobankii sano ee la soo dhaafay. Guga 2015, dadaal ayadoo la adeegsanayo todoba talobixin ayaa bartilmaameed u ah xarumaha Milky Way iyo M87, laakiin cimilada xun ayaa caqabad ku noqon karta kormeerka.
Laba sano kadib, bishii Abriil 2017, shabakadda sideed telescopes, oo ay ku jiraan Koonfurta Kole. Telescope, oo la barbardhigay saacadaha atomiska, ayaa arkay labadaba bartilmaameed u ah maalmaha 10.
Waxaan qaatay kooxda Horizon Event laba sano si aan u yareeyo oo aan u soo ururiyo natiijooyinka xajmiga 2017. Xogtu waxay ahayd mid aad u ballaaran oo lagu gudbiyo Internetka, sidaas darteedna waa in lagu dhajiyo dhago adag oo lagu celiyaa MIT Raadinta Qoyska gudaha Westford, Massachusetts, iyo Machadka Max Planck ee Raadiyaha Raadiyaha ee Bonn, Jarmalka.
Xogta laga helay Koonfurta Kole ayaa iman kari waayey ka hor Diseembar 2017, ayuu yiri Doeleman, "maxaa yeelay waxay ahayd jiilaalka Antarctic, oo aan waxba laga soo gelin karin ama ka bixi karin". 19659002] Sanadkii la soo dhaafay, kooxdu waxay u kala qaybisay afar kooxood si ay isugu uruuriyaan sawirada dump. Si aad udheeraato oo aad uga fogaato nacaybka, kooxuhu isma xiriraan midba midka kale, ayuu yidhi Dr. Doeleman.
Dhanka kale, telescope ayaa sii waday inuu koro. Bishii Abriil 2018, telescope ee Greenland ayaa lagu darey iskaashiga. Kormeer kale ayaa lagu sameeyey Milky Way iyo M87 waxana la qabtay laba jeer macluumaad badan sida kuwa lagu ururiyey 2017.
"Waxaan gaarnay gawaarigeena gaashaanbuur," ayuu yidhi Dr. Doeleman todobaadkii hore. Aragtiyada cusubi kuma jiraan wicitaannada Arbacada, laakiin waxay u oggolaan doontaa inay ku jiraan astronomers inay hubiyaan natiijooyinka 2017 oo ay daba galaan godadka madow ee sanadaha badan.
"Waxaa la qorsheynayaa in la sameeyo indha-indhayntan si aan qarsoodi lahayn," ayuu yiri Doeleman, oo bilaabay xirfadiisii ​​cusub ee ahayd sida ugaadhsiga xayawaanka ah, "iyo in la arko sida wax loo beddelo. "
si aad u ogaato koobkii
Mas'uuliyiinta Latvia ayaa 10 qof oo kala duwan oo xayawaan ah ku xiray xayeysiin caruur ah - xnxx